ओलीको निरंकुश प्रवृत्ति छिटै किनारा लाग्छ : डा. रावल « Anumodan National Daily
ओलीको निरंकुश प्रवृत्ति छिटै किनारा लाग्छ : डा. रावल
प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७७, मंगलवार १७:५४
कैलाली / नेकपा एमाले खनाल–नेपाल पक्षका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका इन्चार्ज डा. भीम रावलले पार्टी फुटाउने व्यक्ति अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै रहेको बताएका छन् ।
सो समुह निकट अखिल नेपाल महिला संघको प्रदेश स्तरीय महिला कार्यकर्ता भेलालाई मङ्गलबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले पार्टी विधानलाई उलंङ्घन गर्दै ओलीले आफनो गुटको भेला बोलाएर आफू अनुकुल निर्णय गरी पार्टीलाई दुई भागमा विभाजित गरेका बताए ।
डा.रावलले ओलीले कारवाही गर्छ भनेर कोही पनि नडराउन अपिल गर्दै ओलीको निरंकुशताविरुद्ध प्रवृत्तिलाई छिटै किनारा लगाएरै छाड्ने बताए । ‘पार्टीको नवौँ महाधिवेशनमा केपी ओलीभन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएको व्यक्ति हुँ म,’ डा.रावलले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पनि म अछामबाट विजयी र ओली झापाबाट विजयी भएका हुन । पार्टीको विधि विधान मिचेर कसैले पनि फूर्र्ती नलगाउँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘पालो आइसकेको छ जनता र कार्यकर्ताले ठेगाना लगाउने दिन ।’
उनले कथा सुनाउँदै भने, ‘एउटा बच्चा रहेछ । बच्चा पाउन दुई आमाले न्यायाधीश कहाँ उजुरी हालेछ । न्यायाधीश कस्तो परेछ भने एकदमै धूर्त । न्यायाधीशले भनेछ दुवैले बच्चा पाउन बीच भागबाट चिर्नुपर्छ । नक्कली आमाले भनेछ हुन्छ श्रीमान । त्यस्तै अहिलेको ओली प्रवृत्ति हो ।’